၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် Netflix မှထွက်ခွာရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ ၁၀ ခု - BGR - TELES RELAY
Netflix သည် ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလတွင်ရုပ်သံနှင့်ရုပ်သံ ၅၂ ခုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာထိပ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကား ၁၀ ခုကိုရွေးပြီးပြီ။ သူတို့မသွားခင်သင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။
နို ၀ င်ဘာလမှစပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုစွန့်ခွာသောရုပ်ရှင်များစွာရှိသည် သမုဒ္ဒရာရဲ့က Eleven, သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆယျ့နှစျ, သမုဒ္ဒရာ ဆယ့်သုံး, Moneyball, မောင်းနှင့် အဆိုပါလင်ကွန်းရှေ့နေ.
Netflix ၏နို ၀ င်ဘာလအသစ်များရောက်ရှိခြင်းသည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ဖူးသမျှထဲမှာအတင်းအကျပ်အများဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ဒီဟာ Netflix အတွက် ၂၀၂၀ ရဲ့အနိမ့်ဆုံးလတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ် သရဖူ တကယ်လာမယ့်လအတွင်းက၎င်း၏ပြန်လာအောင်တစ်ခုတည်းသောအဓိကထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းကောင်းမှာ Netflix မှထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိခြင်းသည်နို ၀ င်ဘာလမှမထွက်ခွာမီသင်ကြည့်ရှုလိုသည့်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုသော blockbuster ရုပ်ရှင်ကားအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၊ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဒီဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး သမုဒ္ဒရာရဲ့က Eleven နို ၀ င်ဘာလအစောပိုင်းတွင် Netflix စာကြည့်တိုက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပုံရပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နို ၀ င်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင်၊ နောက်ဆက်တွဲများနှင့်အတူဖယ်ရှားခြင်းခံရသည် သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆယျ့နှစျ နှင့် သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆယျ့သုံး။ သင်တစ် ဦး ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ သမုဒ္ဒရာ ပွဲသုံးပွဲစလုံးနှင့်ပွဲကြည့်ပါ၊ လမကုန်မီသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ယင်းထက်ကျော်လွန် သမုဒ္ဒရာ trilogy ပာ, Netflix ကလည်းဖယ်ရှားပစ်နေပါတယ် မောင်း၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်မေ့လျော့နေပုံရသည်။ ဒါရိုက်တာ Nicolas Winding Refn သည်အမှန်တကယ်ထူးဆန်းသည့်စီမံကိန်းများအပါအ ၀ င်အချို့သောအရာများကိုဆက်လက်ရေးသားရန်ရေးသားခဲ့သည် အဆိုပါနီယွန် Demon နှင့် Amazon ရဲ့ လူငယ်သေဖို့အရမ်းအိုလွန်းဒါပေမယ့် မောင်း သူ၏လက်လှမ်းမှီဆုံးအလုပ်ကိုဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး (လုံးဝကြယ်တေးသံပါရှိသည်) ။
နို ၀ င်ဘာလမှထွက်ခွာသွားသောအခြားကောင်းမွန်သောရုပ်ရှင်များသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် အစိမ်းရောင်ခန်း, ရဲသည်းထိတ်ရင်ဖို နာရီ၏အဆုံးနှင့်ဘေ့စ်ဘောဒရာမာ Moneyball။ သင်၏အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာ့စီးရီးသို့မအောင်မြင်လျှင်၊ သင်သည်ဘေ့စ်ဘောလှုပ်ရှားမှုအချို့နှင့် (ဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိအချို့သောဘရက်ဒ်ပက်တ်)၊ အာရွန်ဆန်ကင်းနှင့်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်ကိုသင်တုန်လှုပ်နေဆဲ Moneyball နောက်လမှာ Netflix ကနေ boot မတက်ခင်သေချာပေါက်သင့် Queue ကိုသွားသင့်တယ် -
အစိမ်းရောင်ခန်း | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
9 | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
မောင်း | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
နာရီ၏အဆုံး | နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်
အဆိုပါလင်ကွန်းရှေ့နေ | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
ဘွဲ့ - ရာသီ ၁၃ | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
Moneyball | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
သမုဒ္ဒရာရဲ့က Eleven | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
Y Tu MamáTambién | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
ရာသီခွင် | နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
လာမည့်လတွင် Netflix မှပျောက်ကွယ်သွားမည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်ဖြည့်ပြီးပါကသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် Netflix တွင်နို ၀ င်ဘာလတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ရုပ်ရှင်၊ ပြပွဲများနှင့်အထူးစာရင်းအပြည့်အစုံ သူတို့ရဲ့အရပျကိုယူ။ သင်မူရင်းခကိုပိုနှစ်သက်ပါကငါတို့မှာလည်းရပါတယ် Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများအတွက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲအပြည့်အဝပြက္ခဒိန်.
ယာကုပ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်နည်းပညာများကိုကောလိပ်တွင်ဝါသနာအနေဖြင့်စတင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်သူမနေထိုင်ရာအတွက်သူလုပ်လိုသောအရာဖြစ်ကြောင်းအလျင်အမြန်သူနားလည်လာခဲ့သည်။ သူသည်နယူးယောက်၌ BGR အတွက်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ယခင်ကထုတ်ဝေခဲ့သောလုပ်ငန်းကို TechHive, VentureBeat နှင့် Game Rant တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://bgr.com/2020/10/26/best-netflix-movies-2020-november-last-chance-shows/ တွင်ပထမဆုံး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ပေါ်လာသည်။
Tele RELAY တစ်ခု 30172 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
Blake Lively ကိုသူမရဲ့နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံမှ hubby Ryan Reynolds နဲ့ Blake Live ကိုပြောပြပါ
iHealth ၏အိုင်ဖုန်းတိုင်းတာမီတာနှင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့် cuff တို့ကို BGR ရောင်းချလျက်ရှိသည်